၂၇.၆.၂၀၁၈. တတိယပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ်
ဘရာဇီးလ် ၂ - ဝ ဆာဘီးယား
အုပ်စု E မှာ တော့ ဘရာဇီးလ်က သုံးပွဲကစား နှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲသရေ ၇ မှတ်နဲ့ အုပ်စု ပထမရကာ ၁၆ သင်းရှုံးထွက် နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်သွားပါပြီ။ ၁၆ သင်း ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲ မှာ ဘရာဇီးလ် က အုပ်စု F ဒုတိယ မက္ကဆီကို အသင်းနဲ့ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်မှာကစားရမှာပါ။ (Xinhua)
ဂျာမနီနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမြို့တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား လူ ၁ ဦးသေဆုံး
ဘာလင်၊ ဇွန် ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဂျာမနီနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Bremen မြို့ရှိ လူနေအဆောက်အဦတစ်ခုတွင် ဇွန်လ ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပြင်းထန်စွာ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် တုန်ခါသွားခဲ့ပြီး လူ ၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၇.၆.၂၀၁၈. ပထမပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
ဆွီဒင် ၃ - ဝ မက္ကဆီကို
ယခုပွဲ အနိုင်ရလို့ အုပ်စု F မှာဆွီဒင် နဲ့ မက္ကဆီကိုအသင်းတို့ကသုံးပွဲကစား နှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲရှုံး ၆ မှတ် စီ အမှတ်တူနေကြပြီးဆွီဒင်အသင်းက ဂိုးအသာနဲ့ အုပ်စုပထမ၊မက္ကဆီကို က ဒုတိယနဲ့ ၁၆ သင်းရှုံးထွက်အဆင့်တက်သွားကြပါပြီ။ည (Xinhua)
၂၇.၆.၂၀၁၈. ဒုတိယပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
တောင်ကိုရီးယား ၂-ဝ ဂျာမနီ
တောင်ကိုရီးယား ကနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပေမယ့် လက်ရှိချန်ပီယံ ဂျာမနီကိုအကောင်းဆုံးအနိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီ ကတော့ အုပ်စု F မှာ နောက်ဆုံးနေရာကနေပြိုင်ပွဲမှထွက်ရပါပြီ။ (Xinhua)
ယူကရိန်းတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် လူ ၄ဦးသေဆုံး ၇ဦးဒဏ်ရာရရှိ
ကိဗ်၊ ဇွန် ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယူကရိန်းနိုင်ငံ Rivne ဒေသ တွင် ဇွန် ၂၅ရက် ညနေပိုင်းက ယာဉ်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနည်းဆုံးလူ ၄ဦး သေဆုံးပြီး အခြားလူ ၇ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့က ဇွန် ၂၆ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၂၆.၆.၂၀၁၈. စတုတ္ထပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ်
အာဂျင်တီးနား ၂ - ၁ နိုင်ဂျီးရီးယား (၁၄',၈၆') (၅၁'ပယ်နယ်တီ)
အုပ်စု D မှာ တစ်မှတ်သာရသေးတဲ့ နာမည်ကြီးအာဂျင်တီးနားဟာ ယခုပွဲ နိုင်မှနောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်မှာမို့ အသေအလဲကစားသွားပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ ပွဲပြီးခါနီး ၈၆' မှာရတဲ့အနိုင်ဂိုးနဲ့ သုံးပွဲကစား တစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲသရေတစ်ပွဲရှုံး ၄ မှတ်နဲ့ အုပ်စုဒုတိယရကာ ၁၆ သင်းရှုံးထွက်အဆင့်ကို တက်သွားပါတယ်။အာဂျင်တီးနားက အုပ်စု C ပထမ ပြင်သစ်နဲ့ ဇွန်လ ၃၀ ရက်မှာ ၁၆ သင်း ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲ ကစားမှာပါ။ နိုင်ဂျီးရီးယားကတော့ ကံမကောင်းလှစွာဘဲ ပွဲပြီးခါနီးအရှုံးဂိုးကြောင့် ၃ မှတ်ပဲရကာအိမ်ပြန်ရပါပြီ။ (Xinhua)
၂၆.၆.၂၀၁၈. တတိယပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ်
ခရိုအေးရှား ၂ - ၁ အိုက်စလန်
(၅၃',၉၀') (၇၆' ပယ်နယ်တီ)
အုပ်စု D မှာ တော့ ခရိုအေးရှားက သုံးပွဲနိုင် ၉ မှတ်နဲ့ အုပ်စု ပထမရကာ ၁၆ သင်းရှုံးထွက် နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်သွားပါပြီ။ ၁၆ သင်း ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲ မှာ ခရိုအေးရှား က အုပ်စု C ဒုတိယ ဒိန်းမတ် အသင်းနဲ့
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မှာကစားရမှာပါ။ (Xinhua)
၂၅.၆.၂၀၁၈. စတုတ္ထပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ်
စပိန် ၂ - ၂ မော်ရိုကို
အုပ်စု B မှာ စပိန်ကတစ်ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲသရေ ၅မှတ်နဲ့ပေါ်တူဂယ်လ် နဲ့အမှတ်တူနေပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဂိုးအသာနဲ့အုပ်စုပထမရကာ ၁၆ သင်းရှုံးထွက်နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပါပြီ။စပိန်ကအုပ်စု A ဒုတိယ ရုရှား နဲ့ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မှာ ၁၆ သင်း ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲ ကစားရမှာပါ။ အီရန်ကတော့ ၄ မှတ်နဲ့အုပ်စုမှာတင်ပြုတ်ပါပြီ။ (Xinhua)
၂၅.၆.၂၀၁၈. တတိယပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ်
ပေါ်တူဂယ်လ် ၁ - ၁ အီရန်
( ၄၅') (၉၀+၃'ပယ်နယ်တီ)
အုပ်စု B မှာ ပေါ်တူဂယ်လ်က တစ်ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲသရေ ၅ မှတ်နဲ့ အုပ်စု ဒုတိယရကာ ၁၆ သင်းရှုံးထွက်နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပါပြီ။ ပေါ်တူဂယ်လ် ကအုပ်စု A ပထမ ဥရုဂွေးနဲ့
နဲ့ ဇွန်လ ၃၀ ရက်မှာ ၁၆ သင်း ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲ
ဘရပ်ဆဲလ်မြို့တွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက် နေအိမ်များ ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရ
ဘရပ်ဆဲ၊ ဇွန် ၂၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဘရပ်ဆဲလ်မြို့ မြောက်ဘက်တွင် ဇွန်လ ၂၅ ရက်ညနေပိုင်းတွင် ကုန်လှောင်ရုံ တစ်ရုံ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။